माइतीघरमा डा. केसीका पक्षमा प्र’दर्शन
काठमाडौँ : चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै १९ औं पटक अनशनरत डा. गाेविन्द केसी पक्षले बिहीबार भएका सहमतिबाट पनि सरकार पछि हटेको आ’रोप लगाउँदै आ’न्दो’लनमा उत्रिएको छ । सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्सले सहमतिलाई सुनिश्चत गर्न द’बाब स्वरूप शनिबार काठमाडौंको माइतीघरमा प्र’दर्शन गरेको छ । अलायन्सले मुलुकका विभिन्न ठाउँमा पनि प्र’दर्शन जारी राखेकाे छ ।
माइतीघरमा प्रदर्शनका क्रममा सम्बोधन गर्दै डा. केसी पक्षका वार्ता टोलीका सदस्य अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संवादका लागि अनशन बसेको २४ दिन कुरेको सरकारले वार्तालाई गम्भीरताका साथ नलिएको बताए । बिहीबारको वार्तापछि गृहकार्यका लागि भन्दै सरकारले आफूहरुलाई बेवास्ता गरेको बताएका छन् ।
बिहीबारको वार्तापछि २४ घण्टासम्म त्यसै आफूहरुलाई सरकारी वार्ता टोलीले रोकेर राखेको अधिवक्ता अर्यालले बताए । शुक्रबार मध्यराति भएको वार्तामा पनि बिहीबार भएको सहमति पालना गर्न सक्दैनौं भनेर सरकारी वार्ता टोली पन्छिएको उनले बताएका छन् ।
अनशनरत डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्थामा तलमाथि भएको त्यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले लिनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबारको वार्ता शिक्षामन्त्री पोखरेलले अवरुद्ध गरेको पनि अर्यालले आ’रोप लगाएका छन् ।
यसैबीच शिक्षामन्त्री पोखरेलले डा. केसीका मागहरुबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्न सरकारी वार्ता टोली लिएर बालुवाटार गएका छन् । डा. केसीको मागप्रति सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघ पनि थप आ’न्दो’लनको घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको छ ।